Faallo: Barcelona waa Farmaajeysay!! Arbaco iyo bil sideed ah waa nasiibka sanadkan (Lama Filaan ) - Caasimada Online
Home Maqaalo Faallo: Barcelona waa Farmaajeysay!! Arbaco iyo bil sideed ah waa nasiibka sanadkan...
Faallo: Barcelona waa Farmaajeysay!! Arbaco iyo bil sideed ah waa nasiibka sanadkan (Lama Filaan )
Markaad dib u gocato Maqaalkii aan qoray Maalin Lix (6) ah bisha Sadexaad, Ammintuna tahay 16:05 Xilliga Geeska Afrika, wuxuu ahaa mid abuuray kala duwanaasho fikradeed oo aad u baahsan, waase wax aan filayay in hal maqaal aan la deeqsiin karin bulsho dhan oo kala maskax, caqli iyo dareen duwan.
Aniggu ma aheyn mid ka turjumaya cid gaar ah, balse waxey ila tahay in 60% dadku ay fahmeen ujeedka qormadeyda oo aan ku cabirayay in lama filaanka uu suuragal yahay waqti walba balse kooxda Paris Saint Germain ay heysatay fursadda ugu fiican.
Waa Hubanti in qof walba uu garwaaqsan doono – in cabirkii aan ku saleeyay isbadalkii ka dhacay Somaliya inuu ka dhici karo Camp Nou aan ku saxnaa, balse hubaal waxey aheyd wax aada u adag inuu qof aamino iney xitaa waxaan dhici karaan.
AAN DIB KUGU CELIYO MAQAALKII HORE:
Maqaalkii hore wuxuu noqday mid saameyn xoog leh, wuxuu noqday mid ay qof walba dib u jecleysan karto iney aqrisato – inkastoo qudheyda aan wax eed ah ku lahaan laheyn xitaa hadii ay ku fashilmi laheyd madama aan carabka ku adkeeyay in PSG fursad waafi ah heysato.
Waxaa Jirtay inaan qoray dhawr qodob oo rumeyn kara Lama filaankii iyo Riyadii xalay ka dhacday Camp Nou Dib U Aqriso.
Jamaahiirta Barcelona aad bey uga qeyb qaateen hanaanka kooxda waayo waxey ku taageereen codkooda waana wax laga sugayay Catalonia.
Waxey aheyd maalintooda? MSN aad bey u dadaleen waxey sameeyeen 4-gool iyo 1-caawinaad, waxeyna ka caawiyeen kooxdooda iney soo baxdo.
Haa! Waa isku dhex yaaceen, waana waxyaabaha ugu badan ee siiyay fursadda ugu fiican kooxda Balaugrana.
Cidna dood kama keeni karto in Unai Emery uu hafay (Qalad galay), waayo wuxuu qaatay go’aamo aan u qurux badneyn kooxda (Di Maria inusan kusoo bilaabin iyo inuu Adrien Rabiot) garoonka ku hayay ayaana ugu weyn.
Qof walba waa inuu qiyaasto go’aanno garsoore iney dhici karaan, waliba waxaan carabaabay in go’aanno garsoore oo wanaag u ah Barcelona iney gacan weyn siin karto, waxaana garsooraha Jarmalka ah uu dhigay laba rigoore sidoo kalana wuxuu indhaha ka dabooshay qaladaad kale oo Barca dhib ku ahaa, balse waa aragitidiisa garsoore – waana beni’aadam maahan Robbot.
Inkastoo uusan noqon Spiderman, hadana goolkii uu ka badbaadiyay Cavani, waa mid nooleyay rajada kooxdiisa, wuxuuna sameeyay wax wanaagsan.
Hagaag!! Aan isla imanno gunta maqaalka, Barcelona waxey sidii aan inyar filayay sameeyeen lama filaan, waxeyna muujiyeen iney yahiin kooxda ugu weyn kubadda cagta sidoo kalana waxey sameeyen taariikhdii ugu weyneed ee kubadda cagta.
Qodobaadii Aan Qiyaasay Iney Barcelona Siin Karaan Lama Filaanka Ma Dhaceen? Ma Ila Qabtaa Iney Qodobadaas Saacideen? Su’aal Jawaabteeda laga doonayo
BARCELONA WAA FARMAAJEYSAY?
Hubanti Barcelona waa Farmaajeysay [Markaan ku leeyahay maahan inaan isbarbardhig ku sameynayo koox iyo shaqsi, balse kaliya ka eeg dhanka lama filaanka, cidna ma fileynin in Barca soo bixi doonto xitaa Dadka Catalonia.
Balse inaad fisho wax lama filaan ah waa geesinimo dhankeeda leh, igumana ahan amaan balse wax walba oo dhici kara haka baaqsan inaad tusmeyso.
BIL SIDEED AH IYO ARBACO WAA NASIIBKA SANADKA:
Sidaan isugu lifaaqay labada lama filaan ee dalka Soomaaliya iyo kan Barcelona ee Champions League-ga, ayaan wali ku taaganahay waxeyna labaduba dhaceen Bil Sideed ah, laba bil oo xiriir ah iyo maalin Arbaco ah.
Ma Dhihi Karnaa Arbaco IYo Bil Sideed Ah Sanadkaan Waa U Nasiib? Si fudud haa markaan aragno wixii dhacay, inkastoo ay jiraan dhacdooyin badan oo naga qarsoon hadana intaan ognahay waxaan ku qasbanahay inaan dhahno waa sidaas.
Qof walba fahamkiisa waa gooni, waxaana suuragal ah inaad u aragto inaan ahay qof maqaalkisa ku saleeyay taageero – cidna ma badali karto fikirka aad qormadeyda ka qaadato, balse waxaan rajeynaa in ugu yaraan u qaadato in qormadaan aysan ka imaan maskax waaya arrag fog u ah kubadda catga.
Waxaa Diyaariyay: Abdirashid Mohamud Nor “SHardinHo”